Cliff House Kupera Kwevhiki - Dhizaini magazini
Kupera Kwevhiki Iyi imba yekubatira yekune hove ine gomo rekuwona, kumahombekombe kweKudenga River ('Tenkawa' muchiJapan). Yakagadzirwa nekongiri yakasimbiswa, chimiro iri nyore tube, yakareba mita matanhatu. Rutivi rwenzira kumucheto kwetubu kwakakwenenzverwa uye kwakadzika mukati mevhu, zvekuti inotambanukira kumusoro kubva kubhangi uye inorembera pamusoro pemvura. Maitiro acho ari nyore, zvemukati zvakapamhama, uye rwizi rwedhiri rwakavhurika kudenga, makomo nerwizi. Yakavakwa pazasi pemugwagwa, iyo chete imba yedhaini inoonekwa, kubva parutivi rwenzira, saka kuvaka hakuvharise maonero.
Zita rechirongwa : Cliff House, Vagadziri zita : Masato Sekiya, Izita remutengi : PLANET Creations Sekiya Masato Architecture Design Office.
Architecture, kuvaka uye dhizaini dhizaini
Kupera Kwevhiki Masato Sekiya Cliff House